တပါးသောဘုရားတို့ကို '' ဆနျ့ကငျြလက်ခဏာ
တပါးသောဘုရားတို့ကို '' ဆနျ့ကငျြလက်ခဏာ: တည်ဖို့ဘုရားသခငျ Impossible Making
ယင်းလက္ခဏာများဆနျ့ကငျြတဲ့အခါဘုရားသခငျ, Theism, ကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရလောက်ပါသလဲ
theists ရုတ်တရက်အချို့သောဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့သံသယ, ဝေဖန်ဘုရားမဲ့ဝါဒီရဖို့ဆိုအခွင့်အလမ်းရှိသည်သွားနေတယ်ဆိုရင်, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသိသာဘာသာရပ်တစ်ခုဆိုနိုင်ပါတယ်, နားလည်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိရှိသည်ဖို့ဖြစ်ရပါမည်။ ဒီ "ဘုရား" အရာကဘာလဲ? လူတွေနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအသုံးပွုသောအခါ "ဘုရား," အတိအကျဘာကိုသူတို့ကရန် "ထွက်ရှိပါတယ်" ကိုရည်ညွှန်းဖို့ကြိုးစားနေကြသလဲ တစ်ဦးဆိုနိုင်ပါတယ်, နားလည်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မပါဘဲကထိရောက်သောနှင့်ပညာရှိထုံးစံ၌ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်မဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
ဤသည်, သို့သော်, theists များအတွက်အလွန်ခက်ခဲတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုကဤလက္ခဏာများ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအသီးအသီးကိုအခြားဆန့်ကျင်ရုံရဲ့, သူတို့ကသူတို့ဘုရားမှ attribute တံဆိပ်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများချို့တဲ့ရသောအမှုသည်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းအခြားထွက်ထွက်ဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်နှစ်ခု (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ၏ပေါင်းစပ်တဲ့ယုတ္တိနည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဦးဆောင်နေသောကြောင့်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားရန်မဟုတ်, ဤအရာအလုံးစုံဝိသေသလက္ခဏာများ၏စစ်မှန်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်သောအခါ, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်နားလည်နိုင်သည်။
ဒီတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောအခွအေနေခဲ့ကြပါလျှင်, ယခု, ကထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောပြဿနာမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ လူသားတွေဟာပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, fallible ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူတချို့ကြိမ်အမှုအရာကမှားရဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ အနည်းငယ်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှင်ဒုက္ခခက်ခဲတဲ့အယူအဆအတိအကျညာဘက်ရတဲ့ရှိခြင်းကလူနောက်ဥပမာအဖြစ်ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်လုံးဝဘာသာရပ်ပယ်ချရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဖြစ်မှန်သို့သော်ဤပုံမှန်မဟုတ်သောအခွအေနေမပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ, အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးဘုရားမဲ့ဝါဒီနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်ရှိသည်သောဘာသာတရားနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် incoherent အဓိပ္ပာယ်စိုးမိုးရေးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသောဘာမှတက်ပြသသည့်အခါကတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အံ့အားသင့်ရဲ့အကြောင်း, တကယ်တော့ဒါကြောင့်ဘုံဖြစ်ကြသည်။
တောင်မှa"ကိုလျော့နည်းမကောင်းတဲ့" ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်မည်မျှတကယ်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းချက်ပေးထားတဲ့အရှိန်အဟုန်တစ်ဦးကြိုဆိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့မျိုးစုံယဉ်ကျေးမှု၏အခြေအနေတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီဟောင်းဘာသာတရားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကြသောအခါဤသည်တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဥပမာ, ယင်း၏ဘုရားကိုဖော်ပြရန်ရှေးခေတ်ဟီဘရူးဘာသာရေးနှင့်ရှေးဟောင်းဂရိအတွေးအခေါ်ပညာနှစ်မျိုးလုံးကနေဆွဲယူ။ သူများသည်နှစ်ခုအစဉ်အလာကယ့်ကိုလိုက်ဖက်မရဖြစ်ကြပြီးသူတို့ခရစ်ယာန်အများဆုံးဝိရောဓိ generate ဘာတွေလုပ်နေလဲ ဘာသာရေး ။
Theists ဆက်ဆက်သူတို့ဝိရောဓိကျော်ချောမွေ့သွားပါနိုင်သည့်ဖို့အရှည်အားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ပြဿနာများရှိတယ်လို့အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သူတို့ကဤဝိရောဓိတည်ရှိသို့မဟုတ်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကနှောင့်ရှက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဝေး apologists သှားလိမျ့မညျဘယျလို့ဥပမာတစ်ခုကောက်ဖို့က "Omni" ဝိသေသလက္ခဏာများ (အချို့ဆက်ဆံဖို့ဘုံရဲ့ omniscience , omnipotence, omnibenevolence ထိုသူအပေါင်းတို့မှာတကယ် "Omni" မဟုတ်ကြလျှင်ကဲ့သို့) ။ ထို့ကြောင့် "All-အစွမ်းထက်" သို့မဟုတ်ဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်းလို့ယူဆတယ်သော omnipotence, တူတစ်ခုခုမှအားနည်းနေပါတယ် "သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝအတွင်းဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်း။ "
မဟုတ်တစ်ခုတည်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့ theists ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်အကြား: ငါတို့သည်ဖယ်ဒီသတ်မှတ်ထားရင်တောင်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဝိရောဓိတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။
အတိအကျတူညီဘာသာရေးအစဉ်အလာပင်နောက်လိုက်, ခရစ်ယာန်ဘာသာကဲ့သို့အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ဘုရားသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုမှာခရစ်ယာန်အခမဲ့အလိုတော်လည်းမရှိခဲ့ချေကြောင်းဒါကြောင့် All-အစွမ်းထက်အဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်နေသောနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြှနျုပျတို့ပွုလုံးဝဘုရားသခငျသညျ (တင်းကျပ်သောကယ်လ်ဗင်အယူဝါဒ) ထိဖြစ်ပါသည် - အခြားခရစ်ယာန်ခရစ်ယာန်ဘုရားသတ်မှတ်အဖြစ်မဟုတ် All-အစွမ်းထက်မည်နေစဉ်နှင့် သူကား, တကယ်တော့, ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ (Process ကိုဓမ္မ) သင်ယူခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးညာဘက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းဘာသာရေးအစဉ်အလာ ကျော်လွန်. ရွှေ့နှင့်ဆက်စပ်ဘာသာတရားမှချဲ့ထွင်တဲ့အခါ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ, ဂျူးဘာသာနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာများကဲ့သို့ခြားနားချက်များအဆမပေါက်ပါဘူး။ မွတ်စ်လင်ဒါ "အခြား" အဖြစ်နှင့်ဒါဒီဘုရားမှလူ့ဝိသေသလက္ခဏာများမဆိုထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုစော်ကားကြောင်းလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နဲ့မတူပဲသူတို့ရဲ့ဘုရား define ။ ပင်သူတို့ဘုရားအချိန်အတွက်တဦးတည်းမှာဖြစ်ခြင်းလူသားတစ်ဦးအဖြစ်လူ့ခန်ဓာဖြစ်လာခဲ့သည်ထင်ရှိရာအမှတ် - အပြင်ပန်းနတ်ဘုရားဝိသေသလက္ခဏာများကိုများစွာသောလူနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဘုရား define "တူညီသောဘုရား" လို့ယုံကြည်တဲ့သူခရစ်ယာန်, ။
အဘယ်မှာရှိကိုစွန့်ခွာရသနည်း ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အဲဒီဘာသာတရားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမဆိုကျိန်းသေမှားယွင်းသောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြမထားဘူး။ ဒါဟာအစမရှိ, ဘုရားကိုမကိုးကွယ်သို့မဟုတ်မတည်ရှိပါဘူးနိုင်သည်ကိုသက်သေပြမထားဘူး။ ဘုရား၏အချို့သောမျိုးနှင့်အချို့သောဘာသာတရား၏အမှန်တရား၏တည်ရှိမှုငါမူကားအထက်ဖော်ပြရန်အရာရှိသမျှနှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မမှတ်ချက်ချအဖြစ်လူသားများ fallible ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထပ်တလဲလဲနှင့်တစ်သမတ်တည်းတည်ရှိ (နှင့်ဖြစ်ကောင်းအခြေအနေကမှာမကျေမနပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်) အချို့ဘုရားကိုဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြကြောင်းမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါပြဿနာကိုဆနျ့ကငျြဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူနတ်ဘုရားတည်ရှိနေနိုင်သောသူများမဟုတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့ဘုရားတည်ရှိပါကအဲဒီမှာဖော်ပြထားခံရတမဟုတ်ပါဘူး။
ထို့အပွငျဆနျ့ကငျြသောဘုရားတို့ကိုအတူဘာသာတရားနှင့်အစဉ်အလာအကြား, ၎င်းတို့အားလုံးကိုညာဘက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးမှာတစ်ဦးတည်းသာလက်ျာဘက်ဖြစ်သာဝိသေသလက္ခဏာများ၏အစုံ၏နိုင်ပါတယ်စစ်မှန်သောဘုရား၏စကားမှန်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည် - အရှိဆုံးမှာ။ ဒါဟာအဘယ်သူအားမျှညာဘက်ဖြစ်ကြပြီးဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအစုံနှင့်အတူအချို့သောအခြားဘုရားရှိကွောငျးနည်းတူဖွယ်ရှိ (နှင့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးဒါ) ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူမျိုးစုံသောဘုရားတို့ကိုမတည်ရှိကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအရာအားလုံးကိုပေးသောကျနော်တို့ theists မြှင့်တင်စောင့်ရှောက်သောထိုဘုရားကိုမကိုးကွယ်မဆိုအတွက်ယုံကြည်ဖို့မဆိုအကောင်း, အသံ, ဆင်ခြင်တုံတရားအကြောင်းပြချက်ရှိသနည်း ဤအခွအေနမြေားယုတ္တိနည်းဘုရား၏အချို့သောမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်ကြဘူးပေမယ့်အမှတ်, သူတို့ကမဖြစ်နိုင်ဆင်ခြင်, ဤအမှန်တရားတောင်းဆိုမှုများမှအစွမ်းစေ။ ဒါဟာယုတ္တိနည်းဆနျ့ကငျြဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုကိုယုံကြည်ဖို့ဆင်ခြင်တုံတရားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာစွပ်စွဲအတူတူပါပဲလမ်းပေါ်မှာချတစ်စုံတစ်ဦး (အဘယ်ကြောင့်အစားသူတို့ကို join မဟုတ်လော) ကတစ်ဦးဆနျ့ကငျြထုံးစံ၌သတ်မှတ်ထားသောအခါတလမ်းတည်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအရာတစ်ခုခုအတွက်ယုံကြည်ဖို့ဆင်ခြင်တုံတရားမဟုတ်ပါဘူး။
ဆုံးဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပညာရှိအနေအထားရိုးရှင်းစွာယုံကြည်ချက်နှိမ်ကာဘုရားမဲ့ဝါဒီဆက်လက်တည်ရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား၏တည်ရှိမှုကျွန်တော်ပျက်ကွက်အသံသည်ပင်ကိုယ်မူလအကြောင်းပြချက်ယုံကြည်ရန်ကြိုးစားသင့်ကြောင်းသို့မှသာအရေးကြီးသောဖြစ်သရုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဘုရား၏တည်ရှိမှုကိုတကယ်အရေးကြီးပါတယ်ရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းလျှော့ချဖို့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး; ဘာမှမပါလျှင်, ထိုအထောက်အထားများနှင့်ယုတ္တိဗေဒ၏မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများတောင်းဆိုဖို့အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ငြင်းခုံခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားပေးထားလျက်ရှိသည်ကျနော်တို့တအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောကားကိုဝယ်ခြင်းငှါမျှတမှုအဖြစ်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလျှင်, ငါတို့သည်ကျိန်းသေတဲ့ဘာသာတရားချမှတ်ဘို့မျှတမှုကြောင့်လကျမခံသငျ့သညျ။
CS Lewis ကများနှင့်ခရစ်ယာန်ရူပကတှေ
Madalyn Murray O'Hair ကျောင်းထဲကဆုတောင်းချက် Get ခဲ့သလား
Agnostic ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီ - အဘိအဓိပ္ပာယ်
ဂေါက်ကွင်းတစ်ဦး '' ကိုနှစ်ချက် Bogey '' ရမှတ်ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး Exclamatory မေးခွန်းကဘာလဲ
ဂျပန်ရာတွင်ခန်းဂျီးအတွက်ငါး Element တွေကိုရေးချဖို့ကိုဘယ်လို
နာမည်ကျော်ပန်းချီကား: Henri Matisse အားဖြင့် "ဒီနီစတူဒီယို"
ကျောင်းများစာရင်းပေးရန်ဝါရင့်ဆရာရဲ့ Back ကိုထိပ်တန်း 10 ဦး
နီယွန်နီ Periodic ဇယား Wallpaper
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်နောက်ဆက်
တစ်ဦးနှစ်ဦး-Mode ကို Hybrid ကိုကဘာလဲ?
ဘယ်လို antibody သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံကာကွယ်
Nickelback လိုပဲသင်ဟာ ... အဲဒီ rocker ထဲက Check ပါလျှင်
နယူးက MBA ကျောင်းသားများများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ရဲအရာရှိ Callie ရဲ့တောရိုင်းအနောက် - ဇာတ်ကောင် & ဓါတ်ပုံများ
အစောပိုင်း Tree Nut Drop
အင်ျဂလိ Renaissance ၏မတ်ေတာသကဗျာများ
အဆိုပါအမှောင်ထဲမှာရေဒီယိုသတ္တိကြွ Element တွေကို Glow ပါသလား